Ii-apula zihlala zizixhobo ezidumile zokubikezela ikamva. Kukho inamba yendlela yendabuko kwidoloji yokubona ukuba ngubani umthandi wakhe.
I-peel i-apple, ugcine i-peel kwelinye iqela elide. Xa iqela liphuma, lilahla phantsi. Incwadi ebumbayo yile yokuqala yokuqala igama luthando lwenu.
Lindela kude phakathi kobusuku uze uthathe i-apula ibe ngamaqhekeza ayisithoba. Thatha amacandelwana egumbini elimnyama kunye nesibuko (mhlawumbi ukuxhoma eludongeni okanye umntu obanjwe ngesandla). Phakathi kobusuku, qalisa ukutya ii-apple ngelixa ukhangele kwisibuko. Xa ufika kwisiqwenga sesithoba, usiphose phezu kwephepheni lakho. Ubuso bomthandi wakho kufuneka bubonakale kwisibuko.
Ukuba intombazana inomdla ongaphezu komntu oyedwa, thintela i-apula kwaye uyikhuphe imbewu. Beka imbewu emanzi kwisitramu sakho kwisithandwa ngasinye. Omnye oshiyekileyo ekhohliweyo elukhumbini umele umsizi onothando.
Ngenxa yemibutho yayo kunye nokuvuna, i-apula iphelele kuMagon magic. Zama i-Apple Harvest rite, okanye uzukise unkulunkulukazi wasePomona ekuvuneni.
I-Mabon Apple Harvest Rite : Esi siko sokuvuna senzelwe ama-Wiccans kunye namaPagani, kwaye isebenzisa i-apula kunye neenkwenkwezi zayo ezihlanu ezijoliswe kuyo. Hlonipha oothixo bamandulo eBabon kunye nesikolo sokuvuna.
IPomona ,kazikazi wee-Aples : IPomona yayinguThixokazi onqabileyo ongumRoma, kodwa isabalulekile xa ifika ngokutsalwa kweziqhamo nemithi yezithelo ekuwa.
Ubuqili be- Apple Blossoms : I-apula ifaniswe nokungafi, kodwa ikwabizwa ngokuba yinto yokutya kwabafileyo, yingakho ihlala ibonakala kwimibhiyozo yaseBabon.
Ukongezelela ekubeni yinto ehlwaya kwaye enomnandi, ii-apula zigqibelele kwiiprojekthi zezobugcisa. Zama enye yale nto ukuhlobisa ikhaya lakho ngamandla omlingo we-apple.
I-Apple Candleholders : Yenza isethi yabanikezeli bekhandlela ngokuhlobisa phezulu kwipahla yamaapula .
I-Apple Garlands : Lo mkhwa owenza lula ukhangeleka nje, kodwa uya kushiya ikhaya lakho elimnandi kwaye liyamkela!
I-Apple Butter: Yenza ibhotile yebhotela elimnandi ukugubha isivuno.
Yakha iAtar Altar yeBabon
Imithandazo yePet Cat yasePet
I-Beltane Rites kunye neMveli
Indlela yokuLawula i-Volleyball Block
Jade kwiNkcubeko yeChina